नेपाली नोट सिक्का यसरी छापिँदो रहेछ -हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – Ap Nepal
नेपाली नोट सिक्का यसरी छापिँदो रहेछ -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५२ अनुसार नोट निष्का-शन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक;लाई रहेको छ । यसैको उपदफा (४) अनुसार बैंकले आवश्यक;ताअनुसार विभिन्न दरका नोट निष्काशन गर्न सक्छ । नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आका-र र दर नेपाल सरकारको स्वीकृ-तिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, छ;पाइ गर्ने व्यवस्था समि;तिले निर्णय गरेब;मोजिम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्य;यन प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकताको आधारमा नोट छापिन्छ ।
त्यसरी छापिने नोटमा ६ अङ्कको नम्बर राखि-एको हुन्छ । ६ अङ्कको नम्बर राखी ‘अ १’ बाट नोट छाप्न शुरू गरी ‘अ १००’ सम्म पुर्याइन्छ । यसको आव;श्यकताअनुसार ‘क’ देखि ‘ज्ञ’ सम्म नम्बरसमेत राखी नोट छाप्ने काम गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नरस;हित’को विज्ञ सम्मिलित नोट डिजा;इन समिति रहे;को हुन्छ । नोट डिजा’इन गरी राष्ट्र बैङ्कको बोर्डबाट स्वीकृति गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिन्छ । स्वीकृत भएको नोटमा गभ:र्नरको हस्ता;क्षर स्क्यान गरेर राखी नोट छाप्ने काम गरिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्नु’पूर्व ग्लोबल टेण्डर आ’ह्वान गरेर प्राविधिक र आर्थिक पक्ष सबल रहेको कम्पनीलाई नोट छाप्ने कामको जिम्मा दिइन्छ । छापि’एको नोटको ‘प्रिफेक्स नम्बर’ चलनचल्तीमा ल्याएको सूचना राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेपछि मात्र नयाँ नोटको मान्यता हुन्छ । समि’तिको राय लिई नेपाल स’रकारले राजप’त्रमा सूचना प्रका’शन गरी जुनसुकै बैङ्क नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डाबाहेक अन्यत्र नच’ल्ने गराउ’न सक्छ । बैङ्कद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई निष्का:शन गरिएको नोट नेपालभित्र सबै किसिमको सार्वज’निक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न सर्वस्वीकार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ५३ मा व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी गरीन्छ नोटको डिजाइन – नेपाल राष्ट्र बैंकमा गर्भनर, डेपूटी गभर्नर, इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, वन्यजन्तुविज्ञ, चित्रकार सम्मीलित नोट डिजा’इन समिति हुन्छ । त्यसमा वन्य’जन्तु विज्ञले कुन बन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृति’विद्ले नेपालको कुन संस्कृ’तिलाई प्रबद्र्ध’न गर्ने भन्ने सुझाब दिन्छन् । सबै पक्षको सुझाबको आधारमा नोटमा कस्ता चित्र, नम्बर स’मावेश गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।
यसपछि राष्ट्र बैंकमा नोटको डिजा’ईन गरिन्छ र राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत गरा’इन्छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत गराएपछि मन्त्रीपरिषदु्मा नोटको डिजाइन र डिनो’मेशन स्वीकृतिका लागि पेश गरिन्छ । अर्कोतर्फ, हरेक देशको केन्द्री’य बैंकको गभर्नरले नोटमा हस्ता’क्षर गरेका हुन्छन् । सबै नोटमा गर्भनरले हस्ता’क्षर गर्ने होईन । गभर्नर’को हस्ताक्षर ‘स्क्यान’ गरेर नोटमा राखिन्छ । यद्यपी सबै गभर्नरले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाए’का हुँदैनन् ।
नोटभन्दा बढि लाग्छ नोट बनाउने लागत – अझै अनौठो कुरा के छ भने, एक रुपैयाँ’को सिक्का छा’प्नको लागि डेढ रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर यसको तुलनामा दुई रुपैयाँको नोट छाप्न भने केहि सस्तो पर्ने बताई’एको छ । त्यस्तै नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठुलो नोट’को लागत बढी पर्छ । ठुलो नोटमा ‘सेक्युरिटी फिचर्स’ बढी हुने गरेका कारण यस’लाई छाप्नको ला’गि लागत बढी लाग्ने स्रो’तको भनाई छ । सन् २०१३ पछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१६ मा मात्रै नयाँ नोट छापे’को थियो ।
राष्ट्र बैं’कका अनुसार, एक हजार रुपैयाँ’को एउटा नोट छाप्न १ रुपैयाँ ९० पैसा खर्च भएको थियो भने पाँच सयको नोट छाप्न २ रुपैयाँ ९२ पैसा खर्च भएको थियो । एक सय रु’पैयाँको नोट छाप्न २ रुपैयाँ १५ पैसा ला’गेको थियो भने ५० रुपैयाँ’को नोट छाप्न १ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २० रुपैयाँ दरको एउटा नोट छाप्न १ रुपैयाँ ११ पैसा ख’र्च भएको थियो ।
विदेशमा छापिन्छन्, नेपाली नोट – नेपालका नोटहरु चीन, जर्मनी, स्वीडेन, बेलायत, नेदरल्याण्ड, क्यानडा, फ्रान्स, रसिया, इन्डोनेसीया लगायतका मुलु’कहरुमा छापिन्छन् । यद्यपी सबै मुलुक’ले आफ्नो देशका हरेक स्थानबाट पैसा छाप्ने भने होईन । उनीहरुले आफ्ना देशको एक स्थानको एउटा कम्प’नीबाट मात्रै पैसा छाप्ने गर्दछन् । चीनले चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पाेरे’शनबाट, जर्मनी’ले जिस्क एण्ड डेभ्रिएनट जिएम’बिएच र बन्डेस डर्केरी, स्वीडेन’को क्रेन एबि कम्पनि, बेलायतको डिलारु करेन्सी त्यस्तै फ्रान्सको ओबे-रथर फिडुकेयर, रसियाको फेडरल स्टेट युनेटरी इन्टरप्रा’इजेज, इन्डोनेसीयाको पेरुम पेरुरी, नेदरल्या’ण्डको जोन ईन्सेड बैंक नोट बिभि, क्यानडा:को क्याने’डीयन बैंक नोट कम्पनी लिमिटेड बाट नोटहरु छाप्ने काम हुन्छ ।
नोट छाप्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्दछ । यसमा विश्वका झन्डै २० वटा कम्प’नीले आवेदन दिने गर्दछन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमध्ये १० वटा कम्पनीलाई मात्रै ‘प्रि क्वालिफि’केसनका’े सूचीमा समाबेश गर्ने गरेको छ । ‘प्री क्वालिफीकेसनमा’ परेका कम्पनिको प्राविधीक, र आर्थिक सर्वेक्षण अध्य’यन गरेर मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनी छनौट प्रक्रिया टुंगाउँछ । यद्यपी नोट छाप्नको लागि निश्चित प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ । सरकारले सुन, विदेशी सरकारहरुको ‘सेक्यूरेटीज’ खरिद गरेको हुन्छ ।
यस्तो ‘सेक्यूरेटीज’मा लगानी गर्दा त्यसको व्याज पनि पाइन्छ । चाहिएको बेलामा लगानी फिर्ता लिन सकिन्छ । यो सरकारको सम्पति हो । यिनै तत्वहरु समेत मि’लाएर अर्थत:न्त्रमा जति नोट सार्वजा’निक गर्नुपर्ने हो, त्यस बराब:रको सम्पति हामीसँग छ भनेर काग’जात तयार गरिएको हुन्छ । यी विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी छापेको नोट सिधै बजारमा पठाईदैन । छापिएका नोटको ‘प्रिफेक्स’ नम्बर चलनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले सूचना जारी नगर्दा सम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्नुपूर्वसम्म मुद्रा व्यवस्था’पन विभागको स्टोर रुममा सुरक्षि’त रुपमा नोट राख्छ ।
यसकारण राखिन्छ, सुरक्षा चिह्न – नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिह्न (सेक्युरिटी फिचर) राखि’एको हुन्छ । नोटमा ‘एनआरबी’ लेखिएको सेक्युरीटी थ्रेड (एक प्रकारको धागो) राखिएको हुन्छ । नोट प्रिन्ट गर्दा नै यो धागोको केही भाग नोट बाहिरै देखिने गरी मिला’ईन्छ भने केही भाग नोट भित्र लुकेको हुन्छ यसका साथै नोटमा सामान्य आँखाले नदेखिने ‘सेक्युरिटी फिचरहरु’ प्रशस्त मात्रामा राखिएको हुन्छ । नक्कली नोट बजारमा आउन नस’कोस् भनेर अभिप्रा’यले यस्ता सुरक्षा चिह्न राखिएको हो ।
च्यात्तिएका नोट के गरिन्छ ? – बैङ्कले झुत्रो मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने वा अन्य नोटसँग सटही गरिदिन सक्नेगरी ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्कले डिजा’इन मेटिएको, च्याति’एको, विकृत वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग नभए:को नोट सटही गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ६० अनुसार बैङ्कले नेपालभित्र चलन’चल्तीमा रहेका नोट शोधभर्ना दिने गरी खिच्न वा फिर्ता लिन सक्छ । त्यसरी खिचेका नोट तथा त्रुटि:युक्त मुद्रा तोकिए:बमोजिम धुल्या’उने, काट्ने, फुटाउने वा अन्य कुनै पनि कि:सिमले नष्ट गर्न सक्छ ।
नोट छापिएर विभिन्न माध्यमबाट बजारमा गएपछि पुनः त्यो नोट राष्ट्र बैङ्कमै फर्कन्छ । केरमेट भएका, च्यातिएका, आगोले खाएका आदि पुराना नोटहरू राष्ट्र बैङ्कले खिची त्यसको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा पठाउँछ । च्यातिएर वा आगलागी भएर वा पूर्णरूपमा काम नलाग्ने भएका नोटहरू राष्ट्र बैङ्कमा फर्कंदैनन् । बैङ्कमा नफर्केका यस्ता नोटहरू नेपाली बजारमा चलायमान भइरहेको मानिन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा डढेको वा च्यातिएको नोट भए पनि नम्बरसहित त्यसको २ तिहाइ भाग भएको खण्डमा राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी पाउन सकिन्छ ।
मुलुकी ऐन खोटा चलनको महलको १ नं अनुसार सरका’री टक लागे:को नोट कसैले बाहिर छाप्न, बनाउन लगाउन र बनाउन उद्योग गर्न निषेध गरेको छ । नोट छापी खोटा चल’नको अ’पराध गर्नेलाई बिगोब’मोजिम जरीवाना गरी १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ । कसैले पनि खोटा चलन गरी सम्पत्ति आर्जन गरी त्यस:को शुद्धीक’रण गरेमा समेत सम्पत्ति शुद्धीक’रण निवारण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ७ बमोजिम स’जाय हुन्छ ।
– बैंकिङ खबरबाट
पैसा छापेको भिडियो हेरौँ ..
Posted in आर्थिक समाचार, भिडियो
Prevशरीरका यी लक्षणले गर्छ मृʼगौला ड्याʼ मेजको पूर्व संकेत, नगर्नुहोस् वेवाʼस्ता सबैले हेर्नुहोला..
Nextटेलिभिजनको विषयमा यस्तो ‘सीʼधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रोड्युʼसर दीपक बोहोरा
अण्डा खानुहुन्छ ? एकदिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा स्वाʼस्थ्यमा हानी पुग्दैन ? जानिराखौं
खुशिको खबरः वैशाख १ देखि ट्रायल पास हुनेबि त्तिकै अस्थायी लाइ सेन्स पाइने
बालेल साहलाई पछि पार्दै सुनिता डंगोलले लिइन अग्रता